Ny eva miendrika koveta misy rano mikobana no famantarana raha azo sasana milina na tanana any an-tokantrano ny lamba. Ny tarehimarika ao anatin’ny sary dia manoro ny fangitra avon’ny mari-panan’ny rano amin’ny degre Celsius. Ny tsipika eo ambany dia milaza ny halefaky ny fikosehana ny lamba.
Azo atao tsara anefa ny manasa ny lamba amin’ny rano mafana latsaky ny fangitra voalaza.
Sasa milina amin’ny hodina antoniny, kobana sy fia antoniny. Rano mafana tsy mihoatra ny 30°C. Mety amin’ny lamba miloko vita amin’ny hasy, pôliestera, na mifangaro
Sasa milina amin’ny hodina malefaka, kobana antoniny sy fia malefaka. Rano mafana tsy mihoatra ny 30°C. Mety amin’ny lamba miloko vita amin’ny môdaly,viskôzy, pôliakrilika, pôliestera, na pôliamida.
Sasa milina amin’ny hodina tena malefaka. Kobana antoniny, fia fohy na tsy fiazina. Rano mafana tsy mihoatra ny 30°C. Mety amin’ny lamba miloko vita amin’ny volonondry mahatanty rano.
Sasa milina amin’ny hodina antoniny, kobana sy fia antoniny. Rano mafana tsy mihoatra ny 40°C. Mety amin’ny lamba miloko vita amin’ny hasy, pôliestera, na mifangaro
Sasa milina amin’ny hodina malefaka, kobana antoniny amin’ny rano mangatsiaka, tsy fiazina. Rano mafana tsy mihoatra ny 40°C. Mety amin’ny lamba nomarihina " Easy Care" na " Faciles d’entretien" toy ny atin’akanjo, lamba vita amin’ny môdaly, viskôzy, pôliakrilika, pôliestera, na pôliamida.
Sasa milina amin’ny hodina tena malefaka, kobana antoniny, fia fohy na tsy fiazina. Rano mafana tsy mihoatra ny 40°C. Mety amin’ny lamba miloko vita amin’ny volonondry mahatanty rano.
Sasa milina amin’ny hodina antoniny, kobana sy fia antoniny. Rano tsy mihoatra ny 60°C. Mety amin’ny lamba miloko tsy azo ampangotrahina, vita amin’ny hasy, môdaly, pôliestera, na mifangaro.
Sasa milina amin’ny hodina malefaka, kobana antoniny amin’ny rano mangatsiaka, fia fohy na tsy fiazina. Rano tsy mihoatra ny 60°C. Mety amin’ny lamba nomarihina " Easy Care" na " Faciles d’entretien".
Sasa milina amin’ny hodina antoniny, kobana sy fia antoniny. Rano tsy mihoatra ny 95°C. Mety amin’ny lamba miloko azo ampangotrahina vita amin’ny hasy na lin.
Sasa tànana, tsy kosehina, tsy fiazina. Rano tsy mihoatra ny 40°C
Tsy azo sasana rano. Matetika arahina eva fanasana Matihanina ny lamba tsy azo sasana rano (jereo ny fanasana Matihanina)
Ny eva any amerika avaratra dia mampiasa teboka amin'ny fanondroana ny hafanan'ny rano.
Ny isan'ny teboka araka izany no manondro ny fangitra avon'ny mari-panan'ny rano araka izao filaharana izao:
aza adino ny manokatra ny vozon’akanjo sy bokotra ary ny mandoatra ny paosy alohan’ny hanasana ny lamba;
aza andrasana hisolitika be ny lamba vao sasana ary aza alòna ela loatra koa;
fantino araka ny halotony sy ny lokony ny lamba ary sasao mitokana ny miloko sy ny vaovao;
aza sasàna milina miaraka ny lamba vita amin'ny akora saintetika sy ny lin mba tsy hitsibolobolo;
Pejy manaraka: Famotsiana